Sidee Loogu Muujiyaa Saameynaha saxda ah ee Suuqgeyntaada YouTube-ka? - SoNuker
Sidee Loogu Muujiyaa Saameynaha saxda ah ee Suuqgeyntaada YouTube-ka?
Suuq geynta saamaynta ee YouTube ayaa isu badalaysa dhacdo aad u weyn waqtiyadaan la joogo. In badan oo ka mid ah waa sababta oo ah caannimada sii kordheysa ee barta fiidiyoowga-socodka lafteeda. Bal aan fiirino dhowr nambar halkan:
Iyadoo 2 bilyan isticmaalayaasha billaha ah ee firfircoon ee adduunka (79% dadka isticmaala internetka adduunka oo dhan), YouTube ayaa u soo ifbaxday sidii go-to madal loogu talagalay suuqgeeyayaasha sumadaha.
Daqiiqad kasta, qiyaastii seddex boqol oo saacadood oo ah fiidiyowga fiidiyowga ah ayaa lagu dhajiyaa barxadda, taas oo heshay in ka badan 30 milyan oo soo booqda hal maalin. Sidoo kale, 9% ganacsiyada yaryar ee Mareykanka waxay kujiraan madasha.
In ka badan 1,300 magac ayaa lacag ku garaacaya isticmaaleyaasha YouTube si ay u kafaala qaadaan wax soo saarkooda. Taasi waa heerkii ugu sarreeyay ee abid laga gaaro marka la eego iskaashatooyinka noocyada gaarka ah.
Marka la eego lambarradan, waxay ku habboonaan laheyd in la yiraahdo YouTube iyo suuqgeynta saamileyda ah ayaa gacmaha isula tagaya iyadoo tartanku uu kordhayo oo ay jirto xiiso sii kordheysa oo loogu talagalay dadka ku jira barta. Si kastaba ha noqotee, guusha ku-meel-gaadhka suuq-geynta saamaynta YouTube-ka ayaa iman doonta oo keliya markaad la xiriirto saamile sax ah. Waa kuwan talooyin kooban oo la raaco markaad mid raadineyso:
Tallaabada ugu horreysa ee lagu garto saamaynta sumaddaadu waa in laga caddeeyo niche-gaaga. Waxaad ubaahantahay inaad doorato nooc sifiican ula jaan qaadaya astaantaada. Ansixin dhab ah ayaa ahmiyad weyn u leh suuqgeynta saamaynta YouTube. Isku day inaad ka faa'iideysato wadaagista ay wadaagaan dhagaystayaasha. Tusaale ahaan, dadka taariikhda jecel waxay xiiseyn doonaan daawashada waxyaabaha taariikhiga ah ee YouTube, halka fashionistas ay aad u xiiseyn doonaan kanaallada casriga ah. Ku xidhnow saameyn wax ku dhejinaya waxyaabaha ku dhow magacaaga. Talooyinka kaamerada kaamerada ee dadka noocaas ah waxay ku sameyn doonaan waxyaabo yaab leh astaantaada.
Ogow cidda adiga kaa hadlaysa
Aqoonsiga saameynta ugu habboon ee ku habboon astaantaada ayaa u baahan doonta inaad ogaato suuqaaga bartilmaameedka ee gudaha iyo dibedda. Suuqgeynta saameynta waxeey kaa goosan doontaa natiijooyinka kaliya marka dhagaystayaasha aad bartilmaameedka ku kalsoon tahay sumaddaada. Kadib markaad kasbato aqoontaan, waxaad ubaahantahay inaad ogaato cidda kahadleysa magacaaga iyo meesha. Waxaa jiri kara rag saameyn ku leh oo magacaaga ka sheegaya shabakadaha warbaahinta bulshada. Haddii aad aragto in saamileey uu horay u ansaxinayo ama kugula talinayo sumaddaada, way kuu fududaan lahayd inaad iskaashi la samaysato.
Baro naftaada heerarka saamaynaya ee kala duwan
Caadi ahaan, waxaa jira shan tiir oo saamayn leh oo illaa hadda la caddeeyay iyadoo lagu saleynayo tirada kuwa raacsan ee ay haystaan: Elite (1 milyan +), Marco (100K-1M), Mid-tier (25k-100K), Micro (10K-25K), iyo Nano (1K-10K). Intaad dooranaysid inaad la shaqeysid kuwa saameyn ku leh heerarkan heerarka ah, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso miisaaniyaddaada suuqgeynta. Micro iyo nano-saamileyaasha guud ahaan waa ka qiimo yar yihiin marka loo eego saddexda kale ee heerarka. Waa inaad ogaataa heerarka kaqeybqaadashada ee ay ka abuureen YouTube si aad u sameyso doorashada ugu fiican. Hubso inaad kafiican tahay celceliska tirada aragtiyada iyo gaaritaanka aad rabto inaad kuhesho ololeyaasha suuqgeynta saamaynta.
Hubi ishtags-ka isbeddelaya iyo tabka isbeddelaya
Ugu dambeyntiina, tabka isbeddelka ee YouTube wuxuu noqon karaa ilo saameyn ku yeelan kara sumaddaada. Abuuraha kasta ee YouTube-ka ah, fiidiyoowga soo socda wuxuu noqon karaa mid isha-kubbadaha qabta. Fiidiyowyadan waxay helayaan taageerada algorithms-ka barxadda, waana sababta ay ugu liitaan qaybtan. Waad dhex mari kartaa tabkaan si aad u ogaato midka YouTuber uu soo dhejinayo fiidiyaha "ugu kulul". Qabashada halkan, si kastaba ha noqotee, waa in la helo saameyn wax ku ool ah oo si fiican ugu xirta astaantaada. Xitaa waad ka faa'iideysan kartaa hashtags-ka YouTube-ka si aadan u hubin oo keliya fiidiyowyada la xiriira niche-gaaga laakiin sidoo kale aad u aqoonsato abuurayaashooda. Saameeyayaashan ayaa laga yaabaa inay sameynayaan saameyn yar, laakiin xaqiiqdii isbedel ayey sameyn karaan.
Xaqiiqdii waa inaad isku daydaa tilmaamahan si aad u ogaatid kuwa saameynaya kuwa ku habboon ololahaaga YouTube. Xaqiiqdii waxay kaa caawin doonaan inaad horay u sii wado astaantaada bogga.
Sidee Loogu Muujiyaa Saameynaha saxda ah ee Suuqgeyntaada YouTube-ka? waxaa qoray SoNuker Writers, 6 October 2020
Sidee Ganacsiyada Yaryar U Isticmaali Karaan YouTube 2021?
Waxaa la daahfuray 2005, YouTube wuxuu noqdey shabakadda warbaahinta bulshada ee fiidiyowga jecel. Sanadihii la soo dhaafay, barnaamijka fiidiyoowga ah ee fiidiyoowga ah wuxuu noqdey mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn, kaliya boos xishood ka sarreeya, taas oo ah
3 Siyaabaha Ugu Dhaqsaha Badan ee Looga Heli Karo 1,000 Macaamiil Youtube - Hagahayaga
Ahaanshaha abuure ka kooban YouTube-ka, inta badan, waa waayo-aragnimo u baahan in la weyddiiyo oo laga raadsado jawaabo su'aalo badan oo shaki la'aan ku habboon farsamadaada. Iyadoo YouTube kor uga kacayso…
Sidee ayey Xayeysiisyada YouTube u xoojin kartaa Wacyigelinta Calaamadaha?
Ma ogeyd in YouTube-ka ay adeegsadaan in ka badan 2 bilyan. Barxadda weyn ee warbaahinta bulshada waxay gaareysaa in ka badan 18-49-sano-jir ku nool Mareykanka marka loo eego shabakadaha kale ee fiilooyinka. Marka la gaaro 2025, waxaa la saadaalinayaa in kala bar Mareykanka….
Sidee YouTubers -ku Ku kasbadaan Nolol Adigoo Abuuraya Fiidiyowyada Software Microsoft?